Gary Neville oo shaaca ka qaaday sababta maamulka Man Utd aysan u magacaabi doonin Antonio Conte | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Gary Neville oo shaaca ka qaaday sababta maamulka Man Utd aysan u magacaabi doonin Antonio Conte
Himilo – Gary Neville ma aaminsana in booska Ole Gunnar Solskjaer ee Manchester United uu halis ku jiro inkastoo laga badiyay kulankii Leicester City wuxuuna hoos u dhigay xiriirkii Antonio Conte.
United ayaa 4-2 lagu garaacay King Power Stadium Sabtidii si ay u sii wataan qaab ciyaareedkii liitay ee keenay in kooxdu ay guuldarro kala kulanto Young Boys Champions League, ka baxdo Carabao Cup kulankii West Ham iyo guuldarradii Aston Villa.
Kaddib markii uu qarash gareeyay xagaagii, Solskjaer waxaa saaran cadaadis, qaar ka mid ah taageerayaashana waxay jeclaan lahaayeen inay arkaan Conte – oo koobab kula guuleystay Chelsea, Inter iyo Juventus oo hadda ah wakiil xor ah – inuu la wareego xilka.
Laakiin Neville ayaan ku qanacsanayn in maamulka United ay soo jiidan doonaan Talyaaniga, sidoo kale ma aaminsana in Conte uu dammaanad qaadayo koobabka, halka uu dareensan yahay in kooxdu ku dhegi doonto Solskjaer.
‘Conte ma noqon doono tababaraha Manchester United uma maleynayo,’ ayuu yiri halyeeyga United intii lagu jiray Instagram Live subaxnimadii Axaddan.
‘Uma maleynayo inay u tegi doonaan ikhtiyaarkaas, shaqsi ahaan. Waa tababare weyn laakiin waxaan u malaynayaa in maamulayaasha qaarkood ay ku habboon yihiin kooxo gaar ah mana u malaynayo in Conte shaqsi ahaan ku habboon yahay United. Sidaan idhaahdo, maareeye weyn laakiin aniga ilama fiicna kan. ‘
Previous: Haweeney go’aansatay inay jajabiso maacuunta gurigeeda
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 85aad